စိုင်ယာတီကာ အကြောနာ အတွက် မသင့်တော်သော အစားအသောက်များ - Hello Sayarwon
စိုင်ယာတီကာ အကြောနာ(Sciatica) ဆိုသည်မှာ ရောဂါအမည်တစ်ခု မဟုတ်ပါ။ ရောဂါအခြေအနေတစ်ခု၏ ရောဂါလက္ခဏာသာဖြစ်ပါသည်။ (၎င်းကို အရပ်ထဲတွင် ပေါင်တန်းခြင်း၊ အကြောညပ်ခြင်းဟု လည်း ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။) အချို့အခြေအနေများတွင် ပြင်းထန်သော ရောဂါတစ်စုံတစ်ခု ဥပမာ။ ကင်ဆာကျိတ်သည် စိုင်ယာတီကာ အကြောနာ ၊ အကြောညပ်ဖြစ်ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ရောဂါအတွက် ကုသမှုနည်းလမ်းများ ရှာဖွေခြင်း အပြင် ကျန်းမာသော အစားအသောက်သည်လည်း စိုင်ယာတီကာ အကြောနာခြင်းကြောင့် ဖြစ်သော နာကျင်မှုကို သက်သာစေရန် ကူညီပေးပါသည်။
စိုင်ယာတီကာ အကြောနာ၊ အကြောညပ်ခြင်းကို ဆိုးရွားစေသည့် အစားအစာများကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
သကြား ထပ်ထည့်ခြင်းသည် အချိုအရသာ နှင့် ကယ်လိုရီဓါတ် တိုးမြှင့်ပေးပါသည်။ သို့သော် အာဟာရ များစွာ မဖြစ်သည့်အပြင် သွေးတွင်းသကြားဓါတ်အပေါ် သက်ရောက်မှု များသည်။ သကြားဓါတ်များသော အစားအသောက်များသည် ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကို ပိုအားပေးသည်။ ထို့ပြင် ထိုအစားအသောက်များကြောင့် လတ်ဆတ်သော အသီးအနှံကဲ့သို့သော ရောင်ရမ်းခြင်းကို တားသည့် အကျိုးများသော အစားအသောက်များကို သိပ်မစားဖြစ်တော့ပါ။ ထပ်တိုးသကြား မြှင့်မားစွာပါဝင်သည့် အစားအစာ ဥပမာ အချို့မှာ သကြားလုံး၊ အချိုရည်၊ ပန်ကိတ်အရည်၊ အချိုပွဲ၊ ကိတ်မုန့်အပေါ်က အလှဆင်ထားသည့် သကြားလွှာ ၊ ကိတ်မုန့် တု့ိဖြစ်ပါသည်။
အာဟာရမပြည့်ဝသော အစားအသောက်များ (သို့) ကိုယ်အလေးချိန်တက်စေသော အစားအသောက်များသည် စိုင်ယာတစ် အာရုံကြောတွင် ပြဿနာဖြစ်စေသည်။ သို့သော် စိုင်ယာတီကာ အကြောနာခြင်းကို လှုံ့ဆော်ပေးသော၊ ပိုဆိုးစေသော အစားအသောက်ရယ်လို့တော့ သတ်သတ်မှတ်မှတ်မရှိပါ။
လေ့လာမှုများအရ ဗီတာမင် ဘီသည် ကျန်းမာသော အာရုံကြောတစ်ရှုးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အစေ့အဆန်များကို သန့်စင်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သော လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဗီတာမင် ဘီ အပါအဝင် တန်ဖိုးရှိသော အာဟာရများကို ဖယ်ထုတ်လိုက်သည်။
ထို့ကြောင့် ပေါင်မုန့်ဖြူ၊ အမျှင်ဓါတ်နည်းသော စီရီယယ်၊ အသင့်စားဆန်၊ ပါစတာ နှင့် ကိတ်မုန့် ဂံျု ဖြင့် ဖုတ်ထားသော မုန့်များ ကဲ့သို့သော ပြုပြင်ထားသော အစေ့အဆန်များအစား သဘာဝအစေ့အဆန်များကို စားသုံးခြင်းသည် အာဟာရနှင့် အမျှင်ဓါတ်အမြောက်အမြား ထောက်ပံ့ပေးပြီး အစာချေဖျက်မှုကို တိုးမြှင့်ပေးကာ အစာစားချင်စိတ်ကို ထိန်းချုပ်ပေးသည်။
ကံမကောင်းစွာပင် လူအများ နားမလည်သောအချက်မှာ ကဖင်းဓါတ်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ခန္ဓါကိုယ်ထဲတွင် အချိန်အကြာကြီး ရှိနေနိုင်ပြီး အိပ်စက်မှုကို အနှောင့်အယှက်ပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် နေ့လယ်ပိုင်းနှင့် ညနေပိုင်းတွင် ကဖင်းစားသုံးမှုကို လျော့ချရန် ထောက်ခံထားကြသည်။ ထိုအချက်သည် လူအားလုံးအတွက် ဖြစ်သည်။ သို့သော် စိုင်ယာတီကာ အကြောနာ ခံစားနေရသော လူများအတွက်တော့ အထူးအရေးကြီးပါသည်။ အကြောနာ၊ အကြောညပ်ဝေဒနာကြောင့် အိပ်မပျော်သည့်ကြားမှ ကဖင်းဓါတ်ကြောင့် ပိုမဆိုးပါစေနဲ့။
ပြည့်ဝဆီသည် ရောင်ရမ်းခြင်းကို ပိုဖြစ်စေသည်။ ပြည့်ဝဆီ အဓိကရင်းမြစ်မှာ နီရဲပြီး ပြုပြင်ထားသော အသားများ၊ မွေးမြူရေးကြက်၏ ပေါင်၊ခြေထောက်၊အတောင်ပံများ၊ မွေးမြူရေးကြက်အရေခွံ၊ ကြော်ထားသော စားစရာများ၊ အဆီများသော နို့ထွက်ကုန်များ နှင့် ဥအနှစ် တို့ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် အစားအသောက်များတွင် ပြည့်ဝဆီအစား အိုမီဂါ သရီးဖက်တီးအက်ဆစ်ကို အစားထိုး စားသုံးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် စိုင်ယာတီကာ အကြောနာ၊ အကြောညပ်ခြင်းနှင့် ဆိုင်သော နာကျင်မှုနှင့် ရောင်ရမ်းခြင်းကို လျော့နည်းစေသည်။
အကယ်၍ သင်သည် စိုင်ယာတီကာ အကြောနာ ဝေဒနာကို ခံစားနေရလျှင် တတ်နိုင်သမျှ မြန်မြန် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ နာကျင်မှုကို သက်သာစေရန် ဖြည့်စွက်စာ အစားအသောက်များ မသုံးစွဲခင် ဆရာဝန်နဲ့ အရင်ပြောဆို တိုင်ပင်ပါ။
Nutrion and Pain. http://www.mayoclinic.org/symptoms/back-pain/in-depth/nutrition-and-pain/art-20208638. Accessed January 12th, 2017.
Low Back Pain / Nutrition and Dietary Supplements. http://umm.edu/health/medical/altmed/condition/low-back-pain. Accessed January 12th, 2017.